Kusukela lokho kuye kudingeke bagqoke amabhuzu ehlobo
Ngokusho nganekwane wasendulo, lezi izicathulo like amabhuzu, iye eziklanyelwe futhi yenzelwe UK soMkhulu wakhe uQueen Elizabeth II, abadumile ngaleso sikhathi wezicathulo Rozhe Vive. Igama lawo livela kwelithi igama lesiNgisi «amabhuzu ancle», okuyinto elihunyushwe ngokuthi "iqakala." Kodwa igama elithi "butilony" ngokuhamba kwesikhathi lishintshelwe "iqakala amabhuzu." Iqakala amabhuzu kukhona kuphela nezicathulo zabesifazane, kunjengokungathi isilinganiso ukusilela phakathi amabhuzu kanye nezicathulo. Yawo yokuvelela befinyelela ithole lapho abanye ngamakota amathathu we tibia futhi ngaleyo ndlela kakhulu ezizungeze iqakala.
Okusanda amabhuzu ehlobo, ebusika, intwasahlobo nekwindla yabakhanga Abaklami owaziwa futhi manje litholakala cishe kuyo yonke iqoqo. Ungakwazi ucaphune isibonelo Roberto Cavalli, Nina Ricci, Gucci, uCalvin 'uKlein nabanye. Futhi okudume kakhulu iqakala amabhuzu nge ubuso evulekile. Le modeli iba ukukhetha ekahle entwasahlobo efudumele noma ngezinsuku zokuqala autumn, uma phashasha ehlobo izicathulo, kanye amabhuzu ukugqoka namanje ekuseni khulu. Bona kahle esikhundleni kuleli cala, izicathulo ne ekhaleni ovulekile futhi ifomu kancane unesithakazelo kumuntu ukugcizelela ubufazi. Abaningi Hollywood izinkanyezi sisheshe sizazise ubunjalo babo.
Olunye uhlobo izicathulo abanjalo bangabaphostoli amabhuzu on a yesikhulumi omkhulu, okuyinto ebaluleke kakhulu kuba inhlanganisela imodeli ongayedwa isithende esikhulu oqine inkundla okusezingeni eliphezulu. Ukuze uthole izicathulo enjalo sokukhulumisana akufanele sibe ifomu classical we isithende, inketho lapho unciphise maqondana ngezansi, kungaba ezithakazelisayo kakhulu base ebanzi. Ngo amaqoqo ahlukahlukene fashion amabhuzu zithandwa kakhulu uzwane ezicijile. umklami ngamunye ibheka ncamashi phezu kwesimo ekhaleni, wasinikeza a ukuma kancane oyindilinga noma esingunxantathu ezicijile. Aphathelene iqakala futhi ungalokothi ozinikela isikhundla salo zabuna. Iqakala ehlobo isitayela zakudala, siphetfo ngesikhathi iqakala, okwenza umlenze besifazane nenhle futhi sexy.
Ukuqinisekisa ukuthi uyobheka zikanokusho enhle njalo, udinga ukwazi ukuthi kuye kudingeke bagqoke amabhuzu. Okokuqala, abamnyama iqakala amabhuzu. Basuke kuhambisana kahle ijazi nangebala ezolinganisa futhi umphelelisi isithombe ezibukwayo. Ngenxa yalokho, kuyinto evamile ukuya emcimbini othile, kwathi uma sihlanganise Ensemble esikhwameni bamba.
Uma bagqoke amabhuzu ehlobo ngokuhlanganyela ingubo emfushane ke kumelwe singakhohlwa ukuthi le nhlanganisela babheke anolaka. Kulokhu, ukusiza zibukeke isithombe bushelelezi kungenziwa mfushane lesikhumba jacket.
Nge iqakala kabi kakhulu kuhlanganiswe aluhlaza iziketi voluminous, ngakho-ke lokhu okukhethwa kukho Kuhle ukungayidli sihlanganise, uma asesabi ethusayo. Libuye asihambisani kubo ahambe kuya maphakathi no-ithole, le nhlanganisela kwephula Ingxenye. Ukuze singene phakathi kwabayishumi abaphasa ngamalengiso, kungcono kuye kudingeke bagqoke amabhuzu ehlobo nge izikhindi noma isiketi esifushane.
Ngo Duet nge amabhuzu sihle stretchevye jeans kahle ukugcizelela ubude imilenze yakho. Vele khumbula ukuthi badinga ugcwalise amabhuzu, hhayi okuphambene nalokho. Madolonzima ungakhetha inketho tights noma leggings, okuyinto classical. inhlanganisela enjalo ingase isetshenziselwe ngaphandle kokungabaza.
Wonke umuntu wesifazane ngeke asondele inhlanganisela: a black ingubo emfushane, tights abamnyama, plus, plus amabhuzu black. Omkhulu, batawuphindze bheka ngasezinyaweni zakhe nemikhonto ngaphandle tights noma ibhulukwe. Kulokhu, ingubo ukukhanya tan and black uzokwenza ukubukeka kwakho nakakhulu.
Nokho, musa ukugqoka lezi amabhuzu imicimbi olusemthethweni. Ziyakwazi kahle kakhulu imfashini yakho cocktail izingubo, kodwa likwazi ukuncintisana namanye izimbadada eyinkimbinkimbi noma ukunciphisa shuttles kubo bonke ukunqoba ekuqaleni.
ukubukeka Original futhi azwakale kamtoti amabhuzu understated. Le modeli kwenza imilenze yakho zibukeke ngisho isikhathi eside futhi slimmer. It is kuhle kuhlangene isiketi ipensela noma ingubo.
Wedding izingubo isitayela Empire. Beauty and feminity
"Parndorf" - isikhungo esidayisa eVienna. Izibuyekezo nezithombe
Udoli Soviet Galina Milovskaya: Biography nesithombe
Kusukela lokho kuye kudingeke bagqoke amabhuzu phezu Wedge: yemfashini
Kangakanani lip nokwengezwa nge asidi i-hyaluronic? inqubo ukubuyekeza ngokuyisisekelo omuhle
Funda indlela tie hijab
Logic-Aristotle: izimiso eziyisisekelo
Isikhunta ngesinkwa (isithombe). Indlela ukhule ekhaya?
Penda ngoba metal ukusetshenziswa ongaphandle - isivikelo ngokumelene ukugqwala iminyaka eminingi ezayo
"Saiga MK-03": ukubuyekezwa kanye Tuning
Makita (Planer): Izici kanye nokubuyekeza
Epiphany Cathedral, orel: ikheli, Amahora okuvula nezithombe
Omnkantsha yilapho? Omnkantsha: umsebenzi, isakhiwo
Ukwakheka inkolo nobuzwe okuyizona zinto France: izici, kwezibalo izinkomba Amaphesenti
Indlela yokuvula amafolda ezifihliwe flash drive usebenzisa umugqa wemiyalo
Ukudla cottage shizi Casserole ku-microwave. iresiphi